လိင်စိတ်စူးစမ်းမှုဆိုင်ရာရောဂါနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများနှင့်စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း (၂၀၀၁) - သင့် ဦး နှောက်သည်သင့်ဆံပင်
အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်အတူ Hypersexual Disorder နှင့်အဆက်မပြတ်
ဒန်ဂျေ Stein, MD Ph.D ဘွဲ့ကို,Donald ဒဗလျူက Black, MDနာသန်အေ Shapira, MD Ph.D ဘွဲ့ကိုနှင့်ရောဘတ်အယ်လ် Spitzer, MD
အွန်လိုင်း Published: 1 အောက်တိုဘာ 2001 https://doi.org/10.1176/appi.ajp.158.10.1590
လူနာ anonymity ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်, ဤနေရာတွင်တင်ပြကိစ္စအသေးစိတ်ကိုနှစ်ခုသီးခြားလူနာနှင့်အပိုဆောင်းအပြောင်းအလဲများကနေ features တွေလည်းပါဝင်သည်ဝိသေသလက္ခဏာဖုံးကွယ်ထားခဲ့ကြသည်။
မစ္စတာတစ်ဦးကလက္ခဏာအေးဂျင့်နှင့်အတူဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောကုသမှုရှိနေသော်လည်းတစ်ထပ်တလဲလဲစိတ်ဓာတ်စိတ်ဓါတ်များအမျိုးသူကြီးတိုင်ကြားစာနှင့်အတူမြင်ကြသူတစ်ဦး 42 နှစ်အရွယ်လက်ထပ်သည်လူတစ်ဦးပညာရေးဆိုင်ရာလူမှုဗေဒပညာရှင်, ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူ fluoxetine နှင့်အတူကုသမှုပေမယ့်, 20 မီလီဂရမ် / နေ့, မကြာသေးမီလများအတွင်းကသူ၏အသက်တာ၌အသစ်သောဖိအားတွေနဲ့အပြိုင်, သူ၏စိတ်ဓာတ်စိတ်ဓါတ်များပြန်ရောက်ခဲ့အတိတ်တွင်အဓိကစိတ်ကျရောဂါကုသအောင်မြင်ခဲ့သော။ ညွှန်ပြ ဤသည်ယားယံခြင်း, anhedonia ဖြင့်လိုက်ပါသွားခဲ့ကြောင်း, အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အိပ်စက်ခြင်းနှင့်အစာစားချင်စိတ်အပြောင်းအလဲများလျော့နည်းသွားသည်။
နောက်ထပ်တူးဖော်ရေးတွင်မစ္စတာတစ်ဦးကလည်းဒီကာလအတွင်းသူအထူးသဖြင့်ညစ်ညမ်းပုံရိပ်များရှာဖွေနေနာရီပေါင်းများစွာတစ်ရက်ဖြုန်း, အင်တာနက်သူ၏အသုံးပြုမှုကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သောကြောင့်ထင်ရှား။ သူကရှင်းရှင်းလင်းလင်းထိန်းချုပ်မှုများဆုံးရှုံးမှုကိုသူ့အဘို့ကိုယ်စားပြုဒီအပြုအမူမှာဒုက္ခဆင်းရဲတင်ခဲ့သည်လည်းသူတတ်နိုင်ထက်သူကအင်တာနက်ဒေါင်းလုဒ်အပေါ်ပိုပြီးပိုက်ဆံဖြုန်းခဲ့မှတ်ချက်ချသည်။ သူ၏အမူအကျင့်လည်းသုတေသနပြုထုတ်လုပ်မှုအတွက်သိသိသာသာကျဆင်းရန်ဦးဆောင်ခဲ့ပြီး, ဒါပေမယ့်သူကအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဆရာမအဖြစ်ဂုဏ်သတင်းခဲ့, သူ၏ post ကိုဆုံးရှုံးမရှိချက်ချင်းအန္တရာယ်ရှိ၏။ သူဟာတစ်နေ့တာအတွင်းအော်ဂဇင်မှ masturbated သောအခါထိုမကြာခဏသူနဲ့သူ့ဇနီးထိုညဉ့်လိင်ခဲ့လျှင်အော်ဂဇင်အောင်မြင်ရန်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါသော်လည်းမိမိအအိမ်ထောင်ရေးဆက်ဆံရေးထိခိုက်ခဲ့ခံစားရတယ်။
ဒါကသမိုင်းကိုချက်ချင်းအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောကိစ္စများပေါ်ပေါက်။ အမြင်တစ်ဦးဖြစ်စဉ်အမှတ် မှစ. , အင်တာနက် "ပြဿနာကိုအသုံးပြုခြင်း" မကြာသေးမီကစိတ်ရောဂါစာပေများတွင်ဖော်ပြထားခဲ့ပြီး (1, 2)။ ဒီ psychopathology ၏အသစ်တစ်ခုအမျိုးအစားဖြစ်သော်လည်းညစ်ညမ်းပစ္စည်းများရောဂါဗေဒအသုံးပြုမှုအဖြစ်အလွန်အကျွံတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေတာရှည်ဖော်ပြထားပါပြီ (3, 4)။ လူနာရဲ့သမိုင်းကိုချက်ချင်းညစ်ညမ်းပြီးစိတ်ဓာတ်ကျစိတ်ဓါတ်များ၏ပြန်လာကြည့်ရှုဘို့အင်တာနက်ကိုမိမိအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်း၏ဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းထုတ်။ အလားတူပင်လူနာရဲ့ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရှာဖွေရေးမှာမည်သို့အကောင်းဆုံး၏မေးခွန်းကိုလည်းမရှိ။
အမြင်တစ် pharmacological အချက်အနေဖြင့်အောင်မြင်စွာလက္ခဏာမှတုန့်ပြန်ကြသူများနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုထုံးနှင့်အတူလိုက်နာရမည်ခံရဖို့ဆက်လက်ကြသူလူနာများကိုအတွက်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေ၏ပြန်လာအပေါ်တစ်ဦးအသေးပေမယ့်ဆေးပညာအရေးကြီးသောစာပေလည်းမရှိ (5)။ ဒီဖြစ်စဉ်များအတွက်အကြောင်းပြချက်ကောင်းကောင်းနားလည်သဘောပေါက်ပေမယ့်ဖိအားတစ်ခုတိုးနေတဲ့အခန်းကဏ္ဍသောဖြစ်နိုင်ခြေသိသာမျက်နှာတရားဝင်မှုရှိပြီးကြသည်မဟုတ်။ ဆေးထိုးတစ်ခုတိုးတချို့ပင်ကိုယ်မူလထောက်ခံမှုရှိပါတယ်သော်လည်းထိုကဲ့သို့သောလူနာများ၏အကောင်းဆုံးစီမံခန့်ခွဲမှုကိုလည်းကောင်းစွာလေ့လာရသေး (5).
ဒီလူနာများ၏အကောင်းဆုံးရောဂါနှင့်စီမံခန့်ခွဲချက်ချင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ရပြီမဟုတ်နိုင်ပေမဲ့, ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုတစ်ခုသိသာလိုအပ်ချက်ဖြစ်ရှိပုံပေါ်ခဲ့ပေ။ Non-အလုပ်-related အကြောင်းပြချက်များအတွက်အလုပ်မှာအင်တာနက်အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်း, unsurprisingly, ယုတ်လျော့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ မိမိအလုပ်ရပ်များအလင်းငှါလာကြပြီသငျ့သညျလူနာကသူ့အလုပ်ရှင်များကဥပဒေကြောင်းအရအရေးယူ facing များအတွက်အန္တရာယ်မှာယူဆရခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ကုသမှုရှာသည်သူ၏ဆုံးဖြတ်ချက်မှလှူဒါန်းခဲ့ကြပါပြီအားထင်ရှားတော်မူသကဲ့သို့ကြုံတွေ့အဆိုပါဒုက္ခဆင်းရဲအချို့နည်းလမ်းတွေထဲမှာကံကောင်းခဲ့ပါတယ်။
နောက်ထပ်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်တွင်မစ္စတာတစ်ဦးကသူတစ်ဦး၏ချိုး-Up ၏အခြေအနေတွင်တစ်ခု 18 နှစ်အရွယ်ကောလိပ်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ခဲ့သောအခါထိုလက္ခဏာနှင့်အတူကုသမှုလိုအပ်ကြောင်းစိတ်ကျရောဂါတစ်ခုဇာတ်လမ်းတွဲရှိခဲ့ဖူးသောပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ဖူးကြောင်းညွှန်ပြ ကြားဆက်ဆံရေး။ အဲဒီမှာစိတ်ကျရောဂါ၏နောက်ဆက်တွဲအလားတူဖြစ်စဉ်များခဲ့, သူသည်3နှစ်ပေါင်း fluoxetine တာခံခဲ့ရတယ်။ သတိထားမေးမြန်း hypomanic သို့မဟုတ် Manic ဖြစ်စဉ်များ၏မဟုတ်သလိုအခြားအဝင်ရိုးငါအခြေအနေများမရှိသမိုင်းထင်ရှား။ မှတ်စု၏, သို့သော်, သူ့စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေအများအပြား atypical ကြ၏ စိတ်ကျရောဂါသည့်အခါသူကပိုပြီးအစာစားပြီးပိုအိပ်တော်မှာနှင့်ငြင်းပယ်ခံရ sensitivity ကိုအထောက်အထားရှိ၏။
သူကစိတ်ဓာတ်ကျခဲ့လာသောအခါမစ္စတာတစ်ဦးကညစ်ညမ်းပစ္စည်းများနှင့်အတူသာအာရုံစိုခံခဲ့ရပေမယ့်, အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏သိသာထင်ရှားသောအသုံးပြုမှုသည်သူ၏စိတ်ကျရောဂါဆေးဝါးတုန့်ပြန်ခဲ့လျှင်ပင်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူသည်မိမိအသင်ကြားရေးနှင့်သုတေသနခံစားနှင့်သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်အောငျမွငျခဲ့ပေမယ့်အလုပ်စိတ်ဖိစီးမှုအခါအချိန်များတွင်သူကပိုပြီး masturbated ။ သူ၏ဇနီးကလေးများရှိသည်ဖို့နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါနှင့်မသူတို့ကလေးတစ်ဦးမွေးစားခငျြတခံစားရတယ်။ သို့သော်သူမ၏အလုပ်တစ်နှစ်ရက်သတ္တပတ်အတော်ကြာခရီးသွားသူမ၏လိုအပ်, ဤအချိန်များတွင်သူသည်ကပိုအထီးကျန်ခံစားရတယ်သည်မိမိလက်ကိုအပေါ်ကိုပိုပြီးအချိန်ရှိခဲ့ပါတယ်နှင့်ထို့ထက် ပို. masturbate လိမ့်မယ်။ အမှန်စင်စစ်သူ၏ဘဝတစ်လျှောက်လုံးအချိန်များတွင်သူတစ်ခါတစ်ရံမှန်မှန်သုံးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုကြိမ်တစ်နေ့လျှင် orgasm မှ masturbating, ကယ်ဆယ်ရေးတစ်အသိရရှိရန်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေပေါ်မှီခိုခဲ့သည်။ သူကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းဖို့အဆင်သင့်သုံးစွဲနိုင်ရရှိခဲ့ဖူးသည်အထိသို့သော်ဤသည်သူ၏လုပ်ငန်းခွင်သို့မဟုတ်လူမှုရေး function ကိုတားမရခဲ့သည်။
hypomania နှင့်နောက်ကောက်၏လူနာရဲ့မရှိခြင်း hypersexuality ဤအခြေအနေများတစ်လက္ခဏာဖြစ်အံ့သောငှါပေးကအရေးကြီးတယ်။ စိတ်ဓာတ်ခံစားချက်၏ကာလအတွင်းမှာ hypersexual အပြုအမူတွေအတွက်သိသာတိုးထိုကဲ့သို့သောအပြုအမူတကယ်တော့စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေဖြစ်စေခြင်းငှါယခင်အကြံပြုချက်များ၏စည်းကမ်းချက်များ၌စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပြီးလက္ခဏာဆေးဝါးများတုံ့ပြန်စေခြင်းငှါ (6)။ ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုထွက်အာဏာရအထူးသဖြင့်ကိုကင်းသုံးစွဲခြင်း hypersexual ရောဂါလက္ခဏာတွေဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါပေးတော်မူသည်လည်းအရေးပါသည် (7)။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ hypersexual လက္ခဏာတွေနဲ့အတူလူနာ comorbid obsessive-compulsive ရောဂါ (OCD) အပါအဝင်အခြေအနေများနှင့် Tourette ရဲ့ရောဂါတစ်ခုအကွာအဝေးရှိစေခြင်းငှါ (8)ဒါကြောင့်ထိုအထဲကအအုပ်ချုပ်ဖို့သင့်လျော်သည်။
pharmacotherapeutic ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌, atypical စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေ၏ရှေ့မှောက်တွင်အရေးကြီးသောသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ နောက်ကြောင်းပြန်မလှည် monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) ဤသို့သောရောဂါလက္ခဏာများ၏ကုသမှုသုံးဘီးဆိုင်ကယ်စိတ်မကျဆေး Antidepressants ထက်ပိုမိုထိရောက်သောဖြစ်ကြောင်းခိုင်မာတဲ့သက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ် (9)။ MAOI အစားအသောက်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ၏အဆင်မပြေပေးရွေးချယ် serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) အသုံးဝင်သောပထမဦးဆုံးလိုင်းဆေးဝါးများဖြစ်ကြသည်။ ဆက်ဆက်, ဒီလူနာရဲ့အဓိကစိတ်ကျရောဂါ၏ကုသမှု၎င်းတို့၏သရုပ်ထိရောက်မှု hypersomnia နှင့် hyperphagia အတွက် serotonin တစ်ယူဆရအခန်းကဏ္ဍနှင့် SSRIs atypical စိတ်ကျရောဂါကုသထိရောက်သောဖြစ်ကြောင်းတချို့ယခင်အစီရင်ခံစာများအများ၏တွေ့ရှိချက်များနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ပါသည် (10).
အဆိုပါတက္ကသိုလ်သည်ယခင်က3နှစ်ပေါင်းတစ်ဝှမ်းလုံးကိုဒြေမှအင်တာနက်ရုံး access ကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြသည်။ အစပိုင်းတွင်မစ္စတာတစ်ဦးကအများအားဖြင့်သုတေသနရည်ရွယ်ချက်များအဘို့ဤအသုံးပြုသောခဲ့သည်။ အခါသမယတွင်, သို့သော်သူကပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဦးမဟုတ်ဘဲ macho ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမိမိယေဘုယျအားဖြင့်ပိုပြီးကြောက်ခြင်းနှင့်အနားယူအရိပ်နှင့်အတူပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိုင်းယှဉ်တစ်ခုချမှတ်, အင်တာနက်လိင်ချက်တင်ခန်းထဲမှာအချိန်ကုန်။
အချိန်ကျော်သို့သော်အင်တာနက်သည်သူ၏အသုံးပြုမှုများ၏အမြောက်အများညစ်ညမ်းဓာတ်ပုံတွေ၏အထူးသဖြင့်အမျိုးမျိုးရှာဖွေနေဖို့ကျိန် ဆို. ပူဇော်ဖြစ်လာခဲ့ကြောင်း, ထိုအသူအမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံတချို့လမ်းအတွက် macho သို့မဟုတ်ကြီးစိုးခဲ့ခံစားခဲ့ရသူတစ်ဦးသည်လူပတျသကျတယျ။ ထို့နောက်သူသည်သူပုံထဲကအမြိုးသမီးမြား၏ကြီးစိုးအထီးမိတ်ဖက်ခဲ့သည့်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်များအတွက်အခြေခံအဖြစ်ဤပုံကိုသုံးလိမ့်မယ်, သူသည်ထို့နောက်အော်ဂဇင်မှ masturbate လိမ့်မယ်။ အတိတ်နှစ်များတွင်သူရံဖန်ရံခါဓာတ်ပုံများကိုဤအမျိုးမျိုးရှာညစ်ညမ်းစျေးဆိုင်သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပေမယ့်သူကယေဘုယျအားဖြင့်သူ၏ကျောင်းသားတဦးတည်းကိုယ်တော်ကိုတွေ့မြင်ရလိမ့်မည်ဟုကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်ဤရှောင်ကြဉ်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်, အိပ်မက်နှင့်အတူသင်တန်းရှည်သတိလစ်နားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးသောလမ်းများတစ်ဦးအဖြစ်၏ပဋိသန္ဓေယူပြီ။ တစ်ဦးကဆရာလွှမ်းမိုးမှုကိုဒီလူနာရဲ့အဘိဥာဏ်အသက်တာ၌အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍအဘယ်ကြောင့်နားလည်ချင်လိမ့်မယ်။ ရန်လိုရမ္မက်ဖြစ်ကောင်းတစ်လောကလုံးဖြစ်ကြပေမယ့်, ဒီလူနာရဲ့ထူးခြားတဲ့ဘဝသမိုင်းနှင့်နောက်ဆက်တွဲသတိလစ်ပဋိပက္ခများကိုနားလည်သဘောပေါက်တဲ့ကုသမှုအစီအစဉ်ကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲအတွက်အသုံးဝင်သောခဲ့ကြပေမည်။ ဒါဟာအစောပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများအကြောင်းကိုအဖြစ်နောက်ပိုင်းမှာအလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်စေခြင်းငှါအရာကလေးဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုလောက်မေးလျှောက်ဆိုင်တဲ့ဖြစ်ရပြီလို (2).
ဒါဟာ၏ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအကြောင်းအချက်များ-ဖှံ့ဖွိုးတိုးတသိသိသာသာဒီလူနာရဲ့ရောဂါလက္ခဏာများ၏ pathogenesis မှလှူဒါန်းခဲ့ကြပါပြီအင်တာနက်-ပုံပေါ်ကြောင်းသတိပြုပါရန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာနက်ကို Clinician နှင့်၎င်းတို့၏လူနာ psychoeducation နှင့်ထောက်ပံ့မှုအတွက်တန်ဖိုးရှိသောအခွင့်အလမ်းများကိုပူဇော်နိုင်ပေမဲ့ (11)ဒါကြောင့်လည်းရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်အလုပ်မဖြစ်အပြုအမူ၏အခြားမျိုးများအတွက်အခွင့်အလမ်းပေးစေခြင်းငှါ (1, 2).
မစ္စတာတစ်ဦးကဓာတ်ပုံတစ်ပုံပဲညာဘက်ကိုကြင်နာရှာတွေ့တခါတရံနာရီကိုယူစေခြင်းငှါဖော်ပြခဲ့သည်။ ဓာတ်ပုံများတွင်လူကိုကြီးစိုးဖြစ်ဖို့လိုအပျပေမယ့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးထိခိုက်စေခံခဲ့သည်ဆိုသက်သေအထောက်အထားရှိခဲ့သည်ဆိုပါကမစ္စတာတစ်ဦးကနှိုးဆွမခံခဲ့ရပါဘူး။ သူကပုံတစ်ပုံကိုတွေ့ဖူးပြီးတာနဲ့ "ရုံပိုင်ခွင့်" ဟုသူက orgasm မှ masturbate လိမ့်မယ်။ သူကတာရှည်ပုံတစ်ပုံ၏ဤကြင်နာခြင်းဖြင့်နှိုးဆွခြင်းနှင့်ဆင်တူဓာတ်ပုံတွေတစ်ဦးစုဆောင်းမှုခဲ့ပေမယ့်သူကအစဉ်မပြတ်အသစ်သောပစ္စည်းရှာဖွေနေခဲ့သည်ခံခဲ့ရသည်။
တစ်ခါတလေသူကသူနဲ့သူ့ဇနီးမေတ္တာတော်ကိုအောင်ခဲ့ကြသည့်အခါသူ့ကိုနှိုးဆော်ခြင်းသောရုပ်ပုံများကိုမှတ်မိလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်အားဖြင့်၎င်း, ကြီးမားသူတို့နှစ်ဦးစလုံးလုံလောက်သောအဖြစ်ကြုံတွေ့ရသောအဖြစ်ပုံ unvaried နှင့် unadventurous လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဦးကအသေးစိတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသမိုင်းသာမန်ထဲကအလျှင်းမထင်ရှား။ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝဗလက္မရှိသမိုင်းရှိခဲ့သည်။
မစ္စတာတစ်ဦးကမှတ်ချက်ဆိုထားပါသည်နှင့်အတူအခက်အခဲရှိခြင်း, သို့သော်, ကိုပြု၏။ သူဟာသူတို့နှင့်အတူသဘောမတူလျှင်ပင်သူတစ်ပါး၏ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာစေရန်ဥပမာ, တော်မှာ။ နောက်ဆုံးတွင်အမျက်ဒေါသ၏ခံစားချက်များကိုတခါတရံမသင့်လျော်နည်းလမ်းတွေထဲမှာမီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုလိမ့်မယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, အစားတစ်ဦးအထူးသဖြင့်ပြဿနာနှင့်ပတ်သက်ပြီးဦးစီးဌာန၏သူ၏ဦးခေါင်းနှင့်အတူညှိနှိုင်းခြင်းထက်, သူသည်ဘာသာရပ်ဆွေးနွေးမှုများအတွက်ချီ လာ. ရှိရာန်ထမ်းအစည်းအဝေးများအတွက် surly နှင့်နှောင့်အယှက်လမ်းအတွက်ပြုမူလိမ့်မယ်။ လူငယ်ရဲ့အစောပိုင်း maladaptive schema မေးခွန်းလွှာတွင် (12), ထိုလူနာလက်အောက်ခံ schema အတော်ကြာပစ္စည်းများအပေါ်မြင့်မားသောသွင်းယူခဲ့ကြပါတယ်။
လူနာညစ်ညမ်းပုံရိပ်များနှိုးဆွသောအဘို့မိမိအရှာဖွေရေးကိုဖော်ပြရန်အသုံးပြုသောအရာထားသောစာပိုဒ်တိုများ "ဖွင့်ပိုင်ခွင့်," OCD တစ်လက္ခဏာများ၏ဆင်တူသည်။ အစောပိုင်းကမှတ်ချက်ပြုအဖြစ်သို့သော်လည်း, ဒီလူနာပုံစိုးရိမ်စိတ်ပုံမမှန်မဆိုခံစားနေရပြီးမရှိသက်သေအထောက်အထားသရုပ်ပြခဲ့သည်။ လွန်စွာမှရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ပစ္စည်းနှင့်အတူလိင်စိတ်နိုးထတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့မရှိခြင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ sadism ၏ paraphilia ထွက်အုပ်စိုး။ ဤသည်အမှတ် paraphilias နှင့်ဒါခေါ် paraphilia-related မမှန်အကြားမြင့်မား comorbidity ရှိကွောငျးပေးအလေးပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ် (13).
Young က (12) အမျက်ဒေါသ၏ငယ်စဉ်ကလေးဘဝစကားရပ်စိတ်ဓာတ်ဖြစ်ပါတယ်အခါလက်အောက်ခံ schema ဖွံ့ဖြိုးစေခြင်းငှါအကြံပြု, ဤ schema နှင့်အတူအရွယ်ရောက်သူသာသွယ်ဝိုက်ဒီစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုဖော်ပြနိုင်ဖြစ်ကြောင်း။ အခိုင်အမာလေ့ကျင့်ရေးလူနာလက်အောက်ခံ schema ကျော်လွှားရန်စတင်ကူညီနိုင်ရန်အတွက်ကနဦးဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။ အစောပိုင်း maladaptive schemas အခြေခံကိုပြောင်းလဲကူညီရန်သိမြင်မှုကုထုံးများအတွက်လွှဲပြောင်းကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်။ schemas, ဖိအား, ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ခံစားချက်အကြားဆက်ဆံရေးရိုးရှင်းစွာတဦးတည်း-directional ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ပါဝင်ပေမယ့်, အစား, ရှုပ်ထွေးသောဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်မထားဘူး။
မစ္စတာတစ်ဦးကကနဦးအများအားဖြင့် psychopharmacological အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်သောမိမိစိတ်ရောဂါကြောင့် psychotherapy လွှဲပြောင်းငြင်းဆန်ပေမယ့်မီလီဂရမ် / နေ့ 40 မှ fluoxetine တစ်ခုတိုးဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ လာမယ့်ရက်သတ္တပတ်အတော်ကြာကျော်ကဒီခံစားချက်လက္ခဏာတွေအတွက်နောက်ထပ်တိုးတက်မှုမှဦးဆောင်ပေမယ့်လိင်စိတ်လျော့ကျသို့မဟုတ်သူ၏ hypersexual အပြုအမူအတွက်မဆိုပြောင်းလဲဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ တချို့ကလကြာပြီးနောက်မစ္စတာတစ်ဦးကစိတ်ပညာရှင်တစ်ဦးနဲ့သူ့ရဲ့ရောဂါလက္ခဏာဆွေးနွေးရန်သဘောတူခဲ့သည်။
အဆိုပါ 1 နှစ်နောက်ဆက်တွဲမှာ, သူ psychotherapy ဆိုထားပါသည်အတွက်အခက်အခဲများနှင့်အတူကူညီခြင်းအတွက်အသုံးဝင်ခဲ့ကြောင်းခံစားရတယ်။ အမှန်မှာသူကယခုဤကိစ္စကိုသူကအတူတူသူသည်မိမိအလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးခဲ့ခံစားမှုနှင့်အတူ, သူ၏အစောပိုင်းစိတ်ကျရောဂါမှ, အလုပ်မှာခံစားခဲ့ရစိတ်ဖိစီးမှုမှလှူဒါန်းခဲ့ဖူးကြောင်းခံစားရတယ်။ တိုးမြှင့်အလုပ်ကဖိစီးမှုသို့မဟုတ်အထီးကျန်အချိန်များတွင်သူနေဆဲညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းမှကျရောက်နေတဲ့ခဲ့ပေမယ့်, သူ့ပြဿနာကအင်တာနက်အသုံးပြုမှုအတွက်ကျဆင်းခြင်းလည်းရှိခဲ့သည်။
တစ်ဦးစိတ်ရောဂါနှင့်စိတ်ပညာရှင်တစ်ဦးအကြား splitting ကုထုံးအလားအလာပြဿနာများ၏နံပါတ်ပါဝငျ; ဆက်ဆက်လူနာရှက်စရာတွေ့ကြောင့်ရောဂါလက္ခဏာတွေ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်အသစ်တခုလူတစ်ဦးမှထိုအထုတ်ဖော်ရန်ရှိခြင်း၏အတွေးကိစ္စရပ်များပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်သည်။ fluoxetine တစ်ခုတိုးလာထိုးဖို့စိတ်ဓာတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေ၏တုန့်ပြန်နေတဲ့ယခင်အစီရင်ခံစာထံမှသက်သေအထောက်အထားနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ပါသည် (5)။ SSRIs အလွန်အကျွံတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်အလားတူရောဂါလက္ခဏာတွေလျော့ကျလာအတွက်အသုံးဝင်သောဖြစ်အစီရင်ခံခဲ့ကြပေမယ့်, သူတို့ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုများအစဉ်အမြဲခိုင်မာတဲ့မဟုတ် (6, 8, 14)။ ထို့အပြင်ထိုကဲ့သို့သောရောဂါလက္ခဏာတွေအဘို့အ desipramine နှိုင်းယှဉ် clomipramine တစ်ထိန်းချုပ်ထားရုံးတင်စစ်ဆေးအတွက်ထိရောက်မှုမတွေ့ရှိခဲ့သည် (15)။ SSRIs တစ်ခုံစိတ်ဓါတ်များရောဂါ၏မရှိခြင်းအတွက်အထီးကျန်၏ဒုက္ခဆင်းရဲလျော့စေခြင်းငှါရှိမရှိအနည်းငယ်ဒေတာရှိပါတယ်ရသောအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်သီအိုရီမေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။
Psychotherapy အများအပြားစာရေးဆရာများအားဖြင့်အလွန်အကျွံတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်အလားတူရောဂါလက္ခဏာတွေများအတွက်အသုံးဝင်သောကုသမှုအစီရင်ခံထားသည် (3)ထိန်းချုပ်ထားလေ့လာမှုမရှိခြင်းဒီသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဧရိယာထဲမှာရှိပါတယ်ပေမယ့်လျက်, psychotherapy ဆက်ဆက် (ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့) ငါမမှန်လေ့ဖြစ်ပေါ် comorbid ဝင်ရိုးများအတွက်အဖြစ် (ထိုကဲ့သို့သောဆိုထားပါသည်နှင့်အတူအခက်အခဲများကဲ့သို့) အချို့သောဝင်ရိုး II ကိုပြဿနာများအတွက်ထိရောက်သောထင်နေသည်။ တစ်ဦးကစုံတွဲများဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားအိမ်ထောင်ရေးကမောက်ကမဖြစ်မှုအထောက်အထားရှိခဲ့ပါပြီပေလိမ့်မည်။ ဒါဟာ pharmacotherapy နှင့် psychotherapy အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ပိုမိုကြောင်းကိုလည်းသီအိုရီအဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလူနာများအတွက်ယေဘုယျအားဖြင့်အပြုသဘောရလဒ်ကိုနေသော်လည်းကြောင့်အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူလက္ခဏာတွေမကြာခဏနာတာရှည်သင်တန်းရှိစေခြင်းငှါသတိပြုဖွယ်ဖြစ်ပါသည် (2).
ဒီမှာလူနာ 100 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း "ရောဂါဗေဒလိင်" ၏ Krafft-Ebbing ရဲ့ဖော်ပြချက်၏ redolent ဖြစ်ပါသည် (16):
ဒါဟာရုန်းရင်းခတ်, ဘဝ၌အဘယ်သူမျှမကအခြားရည်ရွယ်ချက်များ၏ခွင့်အပေါင်းတို့သည်သူ၏အကြံအစည်များနှင့်ခံစားချက်များကိုစိမ်နှင့်မိတ်လိုက်ကဲ့သို့ဖက်ရှင်အတွက်ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်အဖြောင့်မတ်တန်ပြန်တင်ပြချက်များများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေပေးအပ်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတစ်ခုထကြွလွယ်သော, insatiable ဆက်ခံသို့သူ့ဟာသူဖြေရှင်းခြင်းမရှိဘဲဆန္ဒပြည့်တောင်းဆို ခံစားသူသည်ပြည်နယ်၏ဥပဒေများနှင့်စာရိတ္တ၏, မိမိဂုဏ်အသရေ, သူ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုပင်မိမိအသက်ဆုံးရှုံးချိုးဖောက်အဆက်မပြတ်အန္တရာယ်ဖြစ်၏။ ... ဒီရောဂါဗေဒလိင်၎င်း၏သားကောင်များအတွက်ကြောက်မက်ဘွယ်သောဘေးသည်။
ဟုတ်ပါတယ်, ခေတ်မီဆက်သွယ်ရေးမီဒီယာ psychopathology ၏စကားရပ်များအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာ Modes သာတဲ့အကွာအဝေးသည်။ အင်တာနက်ကို, အထူးသဖြင့်အပါအဝင်ကွဲပြားခြားနားသောရောဂါလက္ခဏာ, ဖော်ပြဘို့အရေးပါတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ဖွယ်ရှိသည် "ရောဂါဗေဒလိင်။ "
မျှမျှတတမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများ "ရောဂါဗေဒလိင်" ဝေးဆန်းကနေကြောင်းအကြံပြုခဲ့ကြပြီးစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာရောဂါနှင့်ဆက်စပ်နိုင်ပါတယ် (3, 17)။ အဆိုပါရောဂါယောက်ျားပိုမိုဘုံပေါ်လာသည်နှင့်လူနာ compulsive တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ, ပုံနှိပ်သို့မဟုတ်တယ်လီဖုန်းညစ်ညမ်းအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းနှင့်လိင်လုပ်သားတွေရဲ့န်ဆောင်မှုများ၏ရောဂါဗေဒအသုံးပြုမှုအပါအဝင်ကွဲပြားခြားနားသောအပြုအမူတစ်ခုအကွာအဝေးနှင့်အတူမြင်ကြလိမ့်မည်။ လက္ခဏာများဝမ်းမြောက်စေပြီးဖြစ်ကြောင်းပေမယ့်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုမမှန်နှင့်ဝသကဲ့သို့, အတ္တ dystonicity ၏ Element တစ်ခုရဲ့ပုံမှန်အားဖြင့်လည်းရှိသေး၏။ Comorbid diagnoses စိတ်ဓါတ်များမမှန်, စိုးရိမ်စိတ်ပုံမမှန်ခြင်း, ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်ပါဝင်သည်။ ရောဂါလက္ခဏာများပြင်းထန်စွာမိသားစု, လူမှုရေးနှင့်လုပ်ငန်းခွင် function ကိုထိခိုက်စေစေခြင်းငှါ, အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များလိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါရှိသူများပါဝင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောလူနာသင့်လျော်သောရောဂါနှင့်ကုသမှုများအတွက်လိုအပ်ရှင်းလင်းစွာရှိပါသည်။
နှစ်တွေကွဲပြားခြားနားသောအသုံးအနှုန်းများတစ်အကွာအဝေး "ဒွန် Juanism" နှင့် "nymphomania" အပါအဝင်, ထိုကဲ့သို့သောလူနာရည်ညွှန်းဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြ (18, DSM-III ကို) ။ မဟုတ်ရင်မသတ်မှတ်ထားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမမှန်ပေါ်တွင် DSM-III ကို-R ကိုအပိုင်းဟူသောဝေါဟာရကိုလည်းပါဝင်သည်ပေမယ့် "Non-paraphilic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစှဲ," ဒီအသုံးအနှုန်း DSM-IV ကနေကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive" ၏သဘောတရားကို (19, 20) ဒီ entity နှင့် OCD အကြားတစ်ဦးဖြစ်စဉ်နှင့် psychobiological ထပ်နေသည်ကိုလည်းမရှိသောစိတ်ကူးအပေါ်အခြေခံသည်။ ဆနျ့ကငျြ, အခြားသူများ "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Impulse" ဟူသောဝေါဟာရကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပြီးချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ပုံမမှန်နှင့်အတူထပ်တူအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည် (21, 22)။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ၏အယူအဆကိုလည်းစွဲလမ်းမမှန်နှင့်အတူ putative တူညီအပေါ်အခြေခံပြီးနောက်တဖန်, အဆိုပြုပြီးပါပြီ (3, 23)။ "Paraphilia-related ရောဂါ" နှင့်အတူမြင့်မားတဲ့ comorbidity ၏အမြင်များတွင်အကြံပြုနှင့်ရန်ဖြစ်စဉ်တူ, paraphilias ထားပြီး (13).
တစ်ဦးကသဘောတူ-on ကိုသက်တမ်း၏မရှိခြင်းပွဲတစ်ပွဲဒီဧရိယာ၌သုတေသန၏ဆွေမျိုးနည်းပါးဖို့လှူဒါန်းခဲ့သိရသည်။ မတူညီသောအသုံးအနှုန်းများတစ်ခုချင်းစီပွဲတစ်ပွဲအားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုနှစ်ဦးစလုံးရှိပါတယ်။ အကယ်စင်စစ်သူတို့ကဒီဒေသမှာအနာဂတ်တွင်သုတေသနပြုဖို့မတူညီတဲ့သီအိုရီချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုအကွာအဝေးအကြံပြုအပ်ပါသည်။ သို့သော်သမျှသောဤချဉ်းကပ်မှု၏အားသာချက်များနှင့်ကန့်သတ်မှု, ငါတို့ကခက်ခဲကိုမဆိုတစ်ခုတည်းသီအိုရီမော်ဒယ်ထောက်ခံမှအောင်, ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ကန့်သတ်ပင်ကိုယ်မူလစာပေရှိကွောငျးကိုအလေးပေး (17, 24)။ ဖော်ပြရန် phenomenology ထက်မထောက်ပံ့သီအိုရီအပေါ် DSM ရဲ့အလေးပေးနှင့်အတူစောင့်ရှောက်ခြင်း၌, ဝေါဟာရကို "hypersexual ရောဂါ" ဖြစ်ကောင်းအများဆုံးသည်သင့်လျော်သည်။
"Hypersexual ရောဂါ" ဖြစ်ကောင်းအော်ဂဇင်အတွက် culminate တဲ့သီတင်းပတ်အတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအရေအတွက်အဖြစ်သတ်မှတ်စုစုပေါင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထွက်ပေါက်, လူနာကဒီအုပ်စုထဲမှာအတော်လေးမြင့်သောအသက်သေအထောက်အထားအနေဖြင့်ထောက်ခံမှုအားလက်ခံတွေ့ဆုံ (13), အရာလက္ခဏာတွေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအော်ဂဇင်ပါဝင်ပတ်သက်နေ (ထက်, ဥပမာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်တိုကျတှနျးထားသ) ဖို့ဒီဂရီလူနာများထံမှလူနာကွဲပြားပေမယ့်။ အရေးကြီးသည်မှာ, သို့သော်, ဟူသောဝေါဟာရကို observable ဖြစ်ရပ်အပေါ်အာရုံစိုက်ခြင်းနှင့်ကွာမဆိုဖြစ်နိုင်သည်မလုံလောက်သီအိုရီမူဘောင်ကနေလှုံ့ဆော်ပေး။ "ရောဂါဗေဒ hypersexuality" ၏အဟောင်းများကိုအစားထိုးပွဲတစ်ပွဲခေတ်သစ်နားဖွားများအပေါ်ရှုတ်ချခေါ်ဆိုအသံ။
ဒါကြောင့် (ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့) အခြားရောဂါမျှသာလက်ခဏာကြောင်းအပြုအမူကနေ hypersexual ရောဂါခွဲခြားကြောင်းအဖြေရှာတဲ့စံရေးဆွဲအဖြစ်ပုံမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမှဖြစ်နိုင်ပါသလော ဒါဟာ nonparaphilic လိင်နှိုးဆွသောစိတ်ကူးယဉ်နှင့်အတူအလွန်အကျွံအတွက်အဆက်မပြတ်ရှိကွောငျး, ဥပမာ, တည်လိမ့်ရန်လိုအပ်ပါသည်တိုကျတှနျးထား, ဒါမှမဟုတ်အချိန်ထူးဆန်းသောအရှည် (ဥပမာ6လအတွင်း) ကျော်အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ။ ထို့အပြင်ကြောင့်ရောဂါလက္ခဏာပိုမိုကောင်းမွန်သည်အခြားဝင်ရိုးကျွန်မရောဂါ (ဥပမာ, တစ်ဦး Manic ဇာတ်လမ်းတွဲသို့မဟုတ်လှညျ့ရောဂါ, erotomanic မျိုးကွဲ) နှင့်ရောဂါလက္ခဏာတွေကတာဝန်ယူကြသည်မဟုတ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်သည်ခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့်တိုက်ရိုက်ဇီဝကမ္မဆိုးကျိုးများ (ဥပမာကြောင့်မဟုတ် အလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်တစ်ဆေးဝါးတစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါး) သို့မဟုတ်အထွေထွေဆေးကုသမှုဆိုင်ရာအခွအေနေ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့, တိုကျတှနျးထား, ဒါမှမဟုတ်အပြုအမူ (psychopathology ကိုယ်စားပြု, ဆိုလိုသည်မှာ) အလွန်အကျွံသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်စီရင်တော်မူခြင်း (ဥပမာ, ဆယ်ကျော်သက်အတွက်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်နှင့်အတူအဆက်မပြတ်မြင့်မားစံတန်ဖိုးဖြစ်နိုင်သည်) အကောင့်သို့အသက်အရွယ်တစ် function ကိုအဖြစ်ပုံမှန်မူကွဲယူရမည် ဒီယဉ်ကျေးမှုတန်ဖိုးများ (ဥပမာအိမ်မထောင်ဘဲနေခြင်းတန်ဖိုးထားသောလူနာများတွင်အချို့သောသွေးသားဆန္ဒရမ္မက်နှင့်ဆက်စပ်ဒုက္ခဆင်းရဲ၏ရှေ့မှောက်တွင်စံတန်ဖိုးဖြစ်နိုင်သည်), အဖြစ်လက္ခဏာတွေဒုက္ခဆင်းရဲများ၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်ကြောင်းသို့မဟုတ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများအရေးကြီးသောဒေသများနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်ရာမှအဆိုပါဒီဂရီ။
ဤရွေ့ကားထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနှင့်ဤနေရာတွင်အသုံးပြုသောအသုံးအနှုန်းစာပေအတွက်အဆိုပြုချက်နှင့်ကိုက်ညီများမှာ (17, 24)။ ထို့ကြောင့်ရောဂါလက္ခဏာများ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်နေကြသည်တိုကျတှနျးထားသနှင့် nonparaphilic ဖြစ်ကြောင်းအပြုအမူတွေ paraphilias ၏ DSM-IV ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ကနေအောက်ပါအတိုင်းကြောင့်ထူထောင်; ထိုအမှုများထပ်တလဲလဲ, ပြင်းထန်သောလိင်နှိုးဆွသောစိတ်ကူးယဉ်, သွေးသားဆန္ဒရမ္မက်, ဒါမှမဟုတ်ယေဘုယျအား nonhuman တ္ထု, ဆင်းရဲဒုက္ခသို့မဟုတ်အရှက်မိမိကိုယ်ကိုသို့မဟုတ်တဦးတည်းရဲ့လက်တွဲဖော်, ဒါမှမဟုတ်ကလေးတွေများသို့မဟုတ်အခြား nonconsenting ပုဂ္ဂိုလ်များပါဝင်သောအပြုအမူတွေဖြစ်ကြသည်။ အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာတော့ဒီမှာယုတ္တိဗေဒ hypersexual ရောဂါအတွက်လက္ခဏာများစံတန်ဖိုး arousal ပုံစံများတွင်တွေ့မြင်သူတွေကိုဖြစ်ပါတယ်။
အလားတူပင်အဲဒါကို hypersexual လက္ခဏာတွေပိုကောင်း hypersexual ရောဂါတိကျတဲ့ရောဂါဖွငျ့ထက်အခြားစိတ်ရောဂါသို့မဟုတ်ယေဘုယျဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခြေအနေများအားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့ကြသောအခါဆုံးဖြတ်ရန်ရှင်းလင်းစွာအရေးကြီးပါသည်။ အစောပိုင်းကမှတ်ချက်ပြုအဖြစ်ဥပမာ, ကိုနောက်ကောက်သို့မဟုတ်ကင်းအသုံးပြုမှုနှင့်အတူလူနာ hypersexual အပြုအမူဖော်ပြရန်လိမ့်မည်။ ထို့အပွငျ hypersexual အပြုအမူကွဲပြားခြားနားသောအာရုံကြောအခြေအနေအတော်များများတွင်တွေ့မြင်စေခြင်းငှါ (7)။ ဤနေရာတွင်တင်ပြသည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ခံစားချက် (နှင့်ဖြစ်နိုင်သည်ဆိုထားပါသည်မရှိခြင်း) သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများပိုမိုဆိုးရွားခဲ့ကြပေမည်နှင့်အလှည့်၌သူတို့ကိုအားဖြင့်ပိုမိုဆိုးရွားစေခဲ့ပေမယ့်ရောဂါတစ်ခုတည်းကိုသာတစ်ဦးခံစားချက်သို့မဟုတ်အခြားရောဂါကတာဝန်ယူနိုင်မသက်သေအထောက်အထားရှိ၏။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ psychopathology ထံမှပုံမှန်အပြောင်းအလဲ delineating များသည်အယူအဆရေးရာခက်ခဲတာဝန်ရှိပါတယ် (25)။ အထက်အသုံးပြုသောအသုံးအနှုန်း psychopathology အကြောင်းကိုလက်တွေ့တရားစီရင်ပိုင်အကောင့်သို့ပုံမှန်အပြောင်းအလဲနှင့်ရောဂါလက္ခဏာကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ထိခိုက်မှုနှစ်ဦးစလုံးကိုယူသင့်ကြောင်းအလေးပေးဖော်ပြသည်။ ထို့ကြောင့်ဥပမာ, celibate ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေသူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်သွေးသားဆန္ဒရမ္မက်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဆယ်ကျော်သက်သို့မဟုတ်ဒုက္ခဆင်းရဲအတွက်ပြင်းထန်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ပုံမှန်အား psychopathological မရှိကြပေ။
ပိုပြီးတိကျစွာပုံမှန်နှင့်အတူဆေးပညာဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ရောဂါမမှန်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ကြွယ်ဝသောဒဿနစာပေ, သင်တန်း, ရှိပါတယ် (26-28); hypersexual ရောဂါ၏အမှု၌သကဲ့သို့, phenomenology ၏ပုံစံ (ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်အားဖြင့်) စံတန်ဖိုးဖြစ်ပါသည်အခါ, psychopathology ထံမှပုံမှန်အပြောင်းအလဲ delineating ၏ပြဿနာကိုအထူးသဖြင့်ခက်ခဲသည်။ ဒီနေရာမှာအသုံးပြုတဲ့အသုံးအနှုန်းလက်တွေ့ရောဂါယဉ်ကျေးမှုစံချိန်စံညွှန်းနှင့် ပတ်သက်. အကဲဖြတ်စီရငျခကျြပါဝငျကွောငျးအခိုင်အမာသူအများအပြားစာရေးဆရာများ၏အမြင်များနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ပါသည် (27, 28).
ဒါကြောင့်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မမှန်ပေါ်တွင် DSM အပိုင်းများတွင် "hypersexual ရောဂါ" ထည့်သွင်းရန်သီအိုရီဖြစ်နိုင်ခြေလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း, ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမမှန်ပေါ်တွင်အပိုင်းများတွင်ပိုင်မှအများဆုံးပုံရသည်။ ဤသည်ထိုကဲ့သို့သော (ထကြွလွယ်သောလက္ခဏာများရှိပြီးသို့သော်စားရောဂါအဖြစ်ခွဲခြားသော) bulimia အဖြစ်အလားတူအဖွဲ့အစည်းများ၏ခွဲခြားနှင့်ကိုက်ညီသည်။
အခုလည်း "ပြဿနာကအင်တာနက်အသုံးပြုမှု" အောက်မှာကွဲပြားခြားနားသောအပြုအမူတစ်ခုအကွာအဝေး၏မကြာသေးခင်ကပေါ်ပေါက်လာဤလည်းတစ်ဦးစိတ်ရောဂါရောဂါဖြစ်သင့်ရှိမရှိမေးခွန်းပေါ်ပေါက် (29, 30)။ နှစ်ဦးကိုလေ့လာမှုများ (1, 2) ထိုကဲ့သို့သောအသုံးပြုမှု၏အကျိုးဆက်များကိုအမှန်ပင်ဝေး, များစွာသောဘာသာရပ်များအိပ်စက်ခြင်းမရှိဘဲသွားအတူရောက်ရှိအလုပ်အတွက်နှောင်းပိုင်းကဖြစ်ခြင်း, မိသားစုတာဝန်ဝတ္တရားလျစ်လျူရှုနှင့်ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ဥပဒေရေးရာအကျိုးဆက်များခံစားနိုင်ညွှန်ပြကြသည်။ ဒီလေ့လာမှုတွေအတွက်ပုံမှန်ဘာသာရပ်, Mid-30s မှသူသို့မဟုတ်သူမ၏နည်းပါးခဲ့သည်အနည်းဆုံးအချို့ကောလိပ်ပညာရေးခဲ့, "nonessential" အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အပေါ်တစ်ပတ်ကို 30 နာရီအကြောင်းကိုသုံးစွဲနှင့်ခံစားချက်, စိုးရိမ်စိတ်, ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်း, ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးခဲ့ ရောဂါ။ အင်တာနက်ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းမှလျင်မြန်စွာဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်ပင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ခွင့်ပြုပေးထား (31), ဤအခြေအနေတွင်လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူအထူးသဖြင့်ဆိုင်တဲ့ဖြစ်ပါသည် (32)။ ဒါဟာအင်တာနက်ကိုအပြုအမူတစ်ခုသမိုင်းစံစိတ်ရောဂါအင်တာဗျူး၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ပါဝင်ကြောင်းအကြံပြုဖို့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပုံရသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ထိုကဲ့သို့သောရောဂါလက္ခဏာတွေမကြာခဏ (hypersexual ရောဂါအပါအဝင်) တည်ဆဲ diagnoses ၏စည်းကမ်းချက်များ၌နားလည်သဘောပေါက်စေခြင်းငှါပေးထားရုံပြဿနာကိုအင်တာနက်အသုံးပြုမှုတစ်ဦးရောဂါလက္ခဏာတွေကိုအောင်၏သတိထားရမည့်အကြောင်းရင်းရှိပါတယ်။ hypersexual အပြုအမူများအတွက်အဖြေရှာတဲ့အသုံးအနှုန်းနှင့်စံနှုန်းများအပေါ်သဘောတူညီမှုကျွန်တော်တို့ကိုပိုကောင်းဒီလိုလူနာနားလည်သဘောပေါက်ပါကမျှော်လင့်နေသည်, ပိုကောင်းတဲ့စောင့်ရှောက်မှုပေးကူညီမည်ဖြစ်ကြောင်းထပ်မံသုတေသနအားပေးလိမ့်မယ်။ ယူဆချက်တစ်ခုအကွာအဝေး hypersexual ရောဂါ၏ etiology အကြောင်းကိုရှေ့ဆက်ထားပြီဖြစ်သော်လည်း (3, 17)မဆိုအထူးသဖြင့်သီအိုရီကိုထောကျပံ့ဖို့အတော်လေးအနည်းငယ်ပင်ကိုယ်မူလဒေတာရှိပါတယ်။ ဆေးဝါးများ၏အရေအတွက်သည်အထူးသဖြင့် SSRIs အပေါ်အာရုံစူးစိုက်တာနှင့်အတူအသုံးဝင်သောအကြံပြုခဲ့ကြပေမယ့်ထိန်းချုပ်စမ်းသပ်မှုတွေ၏ရှားပါးမှုအခက်အခဲရှိပါတယ်။ အလားတူပင် psychotherapy ပုံမှန်ကန့်သတ်သုတေသနထောက်ခံမှုရှိနေသော်လည်းထောက်ခံသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ hypersexual ရောဂါနဲ့အတူလက်တွဲပြီးအထူးပြုတဲ့သူ Clinician အများအပြားလူနာသင့်လျော်သောလက်တွေ့စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အတူကူညီပေးခဲ့သည်နိုင်အကောင်းမြင်များမှာ (33).
ဇူလိုင်လ 24, 2000 လက်ခံရရှိ; တည်းဖြတ်မူများကိုဇန်နဝါရီလ 19, ဧပြီ 13, မေလ 22, 2001 လက်ခံရရှိ; မေလ 23, 2001 လက်ခံခဲ့သည်။ စိတ်ရောဂါကုသမှု, Stellenbosch တက္ကသိုလ်များ၏ဦးစီးဌာနထံက၎င်း, စိတ်ရောဂါကုသမှု, အိုင်အိုဝါ, အိုင်အိုဝါစီးတီးတက္ကသိုလ်ရဲ့ဦးစီးဌာန, စိတ်ရောဂါကုသမှု, ဖလော်ရီဒါ, Gainesville တက္ကသိုလ်များ၏ဦးစီးဌာန, နှင့်နယူးယောက်ပြည်နယ်စိတ်ရောဂါ Institute မှ, စိတ်ရောဂါကုသမှုဌာန, ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်, New York က။ ဒေါက်တာ Stein, စိုးရိမ်ပူပန် Disorders အပေါ်ယူနစ်, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနကောင်စီ, စိတ်ရောဂါကုသမှုဌာန, Stellenbosch တက္ကသိုလ်, PO Box 19063, Tygerberg 7505, ကိပ်တောင်း, တောင်အာဖရိကမှလိပ်စာပြန်လည်ပရင့်ထုတ်ရန်တောင်းဆိုမှုများ; [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်] (e-mail,) ဒေါက်တာ။ Stein တောင်အာဖရိက၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနကောင်စီကထောက်ခံသည်။
1 ။ Shapira NA, ရွှေပန်းထိမ် TD, Keck PE Jr က Khosla um, McElroy SL: ပြဿနာအင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ၏စိတ်ရောဂါ features တွေ။ J ကို disorders အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု 2000; 57: 267-272Crossref, Medline, Google Scholar
2 ။ Black က DW, Belsare, G, Schlosser S က: လက်တွေ့ features တွေ, စိတ်ရောဂါ comorbidity နှင့် compulsive ကွန်ပျူတာအသုံးပြုမှုအပြုအမူသတင်းပို့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်အသက်တာ၏ကျန်းမာရေး-related အရည်အသွေးကို။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု 1999; 60: 839-844Crossref, Medline, Google Scholar
3 ။ Goodman ဖြေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ: တစ်ဦးပေါင်းစည်းချဉ်းကပ်။ Madison, Conn နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်များစာနယ်ဇင်း, 1998Google Scholar
4 ။ Freud က S: သုံးလိင်၏သီအိုရီအပေါ်အက်ဆေးများ (1905), အပြီးအစီးစိတ်ဓာတ်အလုပ်လုပ်အတွက်စံ ed, vol7။ လန်ဒန်, Hogarth စာနယ်ဇင်း, 1953, စစ 125-243Google Scholar
5 ။ Fava M က, Rosenbaum JF, McGrath PJ, Stewart က JW, အမ်စတာဒမ် JD, Quitkin FM ရေ: လီသီယမ်နှင့်ကိုခံနိုင်ရည်အဓိကစိတ်ကျရောဂါများအတွက် fluoxetine ကုသမှုသုံးဘီးဆိုင်ကယ်တိုးပွား: တစ်ကို double-မျက်စိကန်း, ထိန်းချုပ်ထားလေ့လာမှု။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 1994; 151: 1372-1374လင့်ခ်, Google Scholar
6 ။ Kafka အမတ်: အမျိုးသားများတွင် nonparaphilic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစှဲနှင့် paraphilias ၏အောင်မြင်သောလက္ခဏာကုသမှု။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု 1991; 52: 60-65Medline, Google Scholar
7 ။ Stein DJ သမား, ဟူဂိုက F, Oosthuizen P ကို, Hawkridge S က, ဗန် Heerden B ကို: hypersexuality ၏ Neuropsychiatry: သုံးဖြစ်ပွားမှုနှင့်ဆွေးနွေးရန်။ CNS spectrum 2000; 5: 36-48Medline, Google Scholar
8 ။ Stein DJ သမား, Holland, E, အန်သိုနီက D, Schneier FR, Fallon BA, Liebowitz MR, Klein DF: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ obsessive များအတွက် Serotonergic ဆေးဝါးများ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစှဲနှင့် paraphilias ။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု 1992; 53: 267-271Medline, Google Scholar
9 ။ Liebowitz MR, Quitkin FM ရေ, Stewart က JW, McGrath PJ, Harrison WM, Markowitz JS, Rabkin JG, Tricamo အီး, Goetz DM, Klein DF: atypical စိတ်ကျရောဂါအတွက်စိတ်မကျဆေး Antidepressants သတ်မှတ်ချက်။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု 1988; 45: 129-137Crossref, Medline, Google Scholar
10 ။ Lonngvist J ကို, Sihvo S က, Syvalahti အီး, Kiviruusu အို: atypical စိတ်ကျရောဂါအတွက် Moclobemide နှင့် fluoxetine: တစ်ကို double-မျက်စိကန်းရုံးတင်စစ်ဆေး။ J ကို disorders အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု 1994; 32: 169-177Crossref, Medline, Google Scholar
11 ။ Stein DJ သမား: အင်တာနက်ပေါ်ရှိစိတ်ရောဂါကုသမှု: တစ်ခု OCD မေးလ်စာရင်းစစ်တမ်း။ စိတ်ရောဂါ Bull 1997; 21: 95-98Crossref, Google Scholar
12 ။ လူငယ်တို့ je: ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး Disorders များအတွက်သိမှုကုထုံး: တစ်ဦးကစီမံချက်-အာရုံစူးစိုက်ချဉ်းကပ်။ Sarasota, Fla, Professional ကအရင်းအမြစ်ချိန်း, 1990Google Scholar
13 ။ Kafka အမတ်, Prentky RA: paraphilias နှင့် paraphilia-related မမှန်နှင့်အတူအမျိုးသားများတွင် DSM-III ကို-R ကိုဝင်ရိုးငါ comorbidity ၏ပဏာမလေ့လာတွေ့ရှိချက်။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု 1994; 55: 481-487Medline, Google Scholar
14 ။ Kafka က M: nonparaphilic compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေများအတွက် Psychopharmacological ကုသမှု။ CNS spectrum 2000; 5: 49-59Medline, Google Scholar
15 ။ Kruesi MJP, Fine S က, Valladares L ကို, Phillips က RA Jr က Rapoport JL: Paraphilias: desipramine နှိုင်းယှဉ် clomipramine တစ်ဦးကို double-မျက်စိကန်း crossover နှိုင်းယှဉ်။ Arch လိင်ပြုမူနေ 1992; 21: 587-593Crossref, Medline, Google Scholar
16 ။ Krafft-Ebbing R ကို: Psychopathia Sexualis: တစ်ဦးက Medico-Forensic လေ့လာမှု (1886) ။ နယူးယောက်, မိသားစုဆရာဝန် Putnam ရဲ့သား 1965Google Scholar
17 ။ Black က DW: compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: တစ်ပြန်လည်သုံးသပ်။ J ကိုလက်တွေ့စိတ်ရောဂါကုသမှုနှင့်အပြုအမူကနျြးမာရေး 1998; 4: 219-229Google Scholar
18 ။ Fenichel အို: Neuroses ၏ Psychoanalytic သီအိုရီ။ နယူးယောက်, WW က Norton, 1945Google Scholar
19 ။ Quadland M က: compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: ပြဿနာတစ်ခု၏အဓိပ်ပါယျနှငျ့ကုသမှုတစ်ခုချဉ်းကပ်။ J ကိုလိင်အိမ်ထောင်ရေး Ther 1985; 11: 121-132Crossref, Medline, Google Scholar
20 ။ Coleman, E: compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဖော်ပြများအတွက် obsessive-compulsive မော်ဒယ်။ နံနက် J ကိုကြိုတင်ကာကွယ်ရေးစိတ်ရောဂါကုသမှု Neurol 1990; 2: 9-14Google Scholar
21 ။ Barth RJ, ကြင်နာတက် BN: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Impulse ၏ mislabeling ။ J ကိုလိင်အိမ်ထောင်ရေး Ther 1987; 1: 15-23Crossref, Google Scholar
22 ။ Stein DJ သမား, Holland, E: "စွဲ" ၏ရောဂါရှာဖွေန့်သတ်ချက်: ဒေါက်တာ Stein နှင့်ဒေါက်တာ Holland ပြန်ကြားချက် (စာတစ်စောင်) ။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု 1993; 54: 237-238Medline, Google Scholar
23 ။ Orford J ကို: Hypersexuality: မှီခို၏သီအိုရီအဘို့အဂယက်ရိုက်။ br J ကိုစွဲ 1978; 73: 299-310Crossref, Google Scholar
24 ။ Stein DJ သမား, Black က DW, Pienaar W: လိင်မမှန်မဟုတ်ရင်မသတ်မှတ်ထားပါ: compulsive ထကြွလွယ်သောသို့မဟုတ်စွဲလမ်း? CNS spectrum 2000; 5: 60-64Medline, Google Scholar
25 ။ Spitzer RL, Wakefield JC: လက်တွေ့အရေးပါမှုသည် DSM-IV အဖြေရှာတဲ့စံနှုန်း: ကမိစ္ဆာလက္ခဏာပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ကူညီပေးသနညျး နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 1999; 156: 1856-1864ြဒပ်မဲ့သော, Google Scholar
26 ။ Boorse ကို C: ရောဂါနှင့်နာမကျန်းအကြားခြားနားတွင်။ ဒဿနိကဗေဒနှင့်ပြည်သူ့ရေးရာ 1975; 5: 49-68Google Scholar
27 ။ Wakefield JC: စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါ၏အယူအဆ: ဇီဝဗေဒအချက်အလက်များနှင့်လူမှုရေးတန်ဖိုးများကိုအကြားနယ်နိမိတ်ပေါ်မှာ။ နံနက် Psychol 1992; 47: 373-388Crossref, Medline, Google Scholar
28 ။ Reznek L ကို: စိတ်ရောဂါကုသမှု၏ဒဿနပညာရှင်ကာကွယ်ရေး။ နယူးယောက်, Routledge, 1991Google Scholar
29 ။ Brenner V ကို: ကွန်ပျူတာအသုံးပြုမှုစိတ်ပညာ, XLVII: အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်း parameters တွေကို, အလွဲသုံးစားမှုနဲ့စွဲ: အင်တာနက်အသုံးပြုမှုစစ်တမ်း၏ပထမဦးဆုံး 90 ရက်။ Psychol ကိုယ်စားလှယ် 1997; 80: 879-882Crossref, Medline, Google Scholar
30. လူငယ် KS: ပိုက်ကွန်ထဲမှာဖမ်းမိ။ နယူးယောက်၊ John Wiley & Sons, 1998Google Scholar
31 ။ McFarlane M က, Bull အက်စ်အက်စ်, Rietmeijer, CA: လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများအတွက်အသစ်ပေါ်ထွက်လာမည့်အန္တရာယ်ပတ်ဝန်းကျင်အဖြစ်အင်တာနက်။ ဂျေအေအမ်အေ 2000; 384: 443-446Crossref, Google Scholar
32 ။ Cooper ကတစ်ဦး, Scherer CR, Boies SC, ဂေါ်ဒွန် BL: အင်တာနက်ပေါ်ရှိလိင်: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတူးဖော်ရေးကနေရောဂါဗေဒစကားရပ်ဖြစ်သည်။ Professional ကစိတ်ပညာ: သုတေသန & အလေ့အကျင့် 1999; 30: 154-164Crossref, Google Scholar
33 ။ Carnes P ကို: အရိပ်ထဲကထုတ်: နားလည်မှုလိင်စွဲလမ်း။ Minneapolis, အဂ္ဂမဟာသီရိသုဓမ္မ, Compcare, 1983Google Scholar